Usoro njikwa ogo - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
XY Tower kwere nkwa ịnapụta ndị ọrụ anyị ọrụ ọkachamara. Usoro njikwa mma bụ otu n'ime isi iwu nke XY Tower. Iji na-arụ ọrụ usoro njikwa Ogo, XY Tower na-ahụ maka ihe niile dị mkpa na ọzụzụ dị mkpa yana ndị ọrụ niile na-arụsi ọrụ ike na itinye usoro njikwa njikwa.
Maka XY Tower, àgwà bụ njem ma ọ bụghị ebe njedebe. Ya mere, ebumnuche anyị bụ ijigide ndị ahịa anyị site na ịmịpụta ihe dị mma earthing, ụlọ elu nnyefe, ụlọ elu telecom, akụkụ ihe owuwu na ngwa igwe na ọnụego asọmpi na ịtọhapụ oge.
N'ịbụ akụkụ dị mkpa nke usoro nrụpụta, a na-ahụta ịdị mma dịka ụkpụrụ ISO. XY Tower System Management System ka enyere ISO 9001: 2015, ISO14001, ISO451001, ISO1461.
Njikwa nke XY Tower kwadoro ịrụ ọrụ ọ bụla nke azụmahịa ahụ n'ụkpụrụ ndị ahụ nke na-enye ndị ahịa niile ọrụ kachasị mma. Nke a na-akwado usoro njikwa na-aga n'ihu nke na-agba ume ka ọdịbendị dị mma na ụlọ ọrụ niile.
Ndị njikwa ahụ na-etinye aka na mmelite na-aga n'ihu nke njikwa njikwa. Nke a bụ iji hụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-egbo mkpa nke ndị ahịa anyị.
Ndi QA / QC bu ndi nlezianya a zụrụ nke ọma nke na-eji akụrụngwa ule oge a iji hụ ụkpụrụ kachasi mma yana imecha nke ọma. Ngalaba a na-eduzi onye isi anyị ozugbo.
Ọrụ nke QA / QC na-ekwe nkwa na akụrụngwa niile na-agbaso ụkpụrụ ISO ma ọ bụ nkọwa ndị ọkọlọtọ chọrọ n'aka ndị ahịa. Omume njikwa ogo na-amalite site na akụrụngwa site na ụgha na ịkpụzi ruo mgbe mbupu ikpeazụ. A ga-edekọ ihe omume nyocha niile nke ọma na Ndepụta Nyocha.
QA / QC bụ naanị ụzọ iji nọgide na-akpa mma. Mepụta ọdịbendị dị mma na ụlọ ọrụ niile ka mkpa. Ndị njikwa ahụ kwenyere na ogo ngwaahịa adịghị adabere na ngalaba QA / QC, ndị ọrụ niile kpebiri ya. N'ihi ya, ndị ọrụ niile emeela ka ha mara na njikwa njikwa na iwu a na ogo yana n'ozuzu ma gbaa ha ume igosi nkwado nke aka ha na sistemụ site na itinye aka na-aga n'ihu.